I-'Minimoon' esanda kuqhuma e-Australia - BGR - T mov RELAY
Accueil » ISAYENSI I-'Minimoon' esanda kuqhuma e-Australia - BGR
I-'Minimoon' esanda kuqhuma e-Australia - BGR
Izicishamlilo zivela njalo esibhakabhakeni ebusuku eMhlabeni. Ngokuya ngosayizi wento ebadalayo, bangahamba ukusuka kumkhondo omfishane wokukhanya baye kokuqhuma okukhulu okuthumela ama-shockwaves amamayela kuzo zonke izinkomba. Okuncane kuvame kakhulu, kunjalo, kepha ibhola lomlilo elikhulu elivele e-Australia e-2016 mhlawumbe lalikhetheke kakhulu kunalokho okwatholwa ngabazi ngezinkanyezi okokuqala ngqa.
njengoba ScienceAlert imibiko, iveze ukubonwa kwe-fireball e-2016. kumele kube banzi, kukhiqize umkhondo ogqamile esibhakabhakeni lapho ukungqubuzana okukhulu kokungena komkhathi womhlaba kuye kwakudabula. Manje kucatshangwa ukuthi into mhlawumbe iyisibonelo esingajwayelekile se- "minimoon".
Esikhathini esiningi, umkhathi odabula isibhakabhaka wayesendaweni engafanele ngesikhathi esingafanele ekuzungezeni kwayo iLanga. . Izingxenye zamadwala asendaweni ekugcineni ziyashayisana noMhlaba futhi, lapho zisondele kakhulu, ziyafa ngomlilo ovuthayo. Ngezikhathi ezithile, enye yalezi zinto isondela kuMhlaba nge-angle efanele nesivinini sokungena ekuzungezeni umhlaba wethu, ihamba ngomhlaba ngokuzungeza umhlaba njengomakhelwane omncane.
Ku-athikili entsha eshicilelwe ku Ijenali Yezinkanyezi. Abaphenyi baqoqa konke ukubonwa kwe-2016 yase-Australia besebenzisa Inethiwekhi ye-Fireball Firework ukubala i-angle yomthelela kumkhathi woMhlaba, ijubane lawo nezinye izinto. Iqiniso lokuthi into yayihamba kancane futhi i-angle lapho yawela khona eMhlabeni isikisela ngokuqinile ukuthi ibijikeleza umhlaba wethu okwesikhashana ngaphambi kokuvela kombukiso wawo okhanyayo.
Ngekusasa, ososayensi bathi ubuchwepheshe obusha be-teleskopu esekwe emhlabathini bungasinikeza amandla okubona nokubuka amaminithi afanayo izinyanga noma iminyaka ngaphambi kokuba bafinyelele esiphelweni sabo esibhubhisayo.
Umthombo wesithombe: NASA / ESA
Lolu hlobo lwedayinaso luhlale lubeka amazinyo alo esikhundleni - BGR
Ukuqubuka kweMeshiya kuphoqa uhulumeni ukuthi avale eSamoa njengoba inani lokufa kwabantu linyuka - BGR
OKUPHILA: Umphathi weReal Madrid uZidane unikeza ingcindezi yangaphambi komdlalo ngaphambi kokuhlolwa kukaBruges - VIDEO